मलेसिया जादै हुनुहुन्छ या मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ, भने पनि यो समाचार एकचोटी अवस्य पढ्नुहोला – पुरा पढ्नुहोस्……
मलेसिया जादै हुनुहुन्छ या मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ, भने पनि यो समाचार एकचोटी अवस्य पढ्नुहोला
बिपेन उलङगे । हिमालय टाईम्स
मलेसिया” नेपाली युवाहरुकाे राेजगारिकाे दाेस्राे गन्तव्य मुलुक हाे । यतिबेला करिब ७ लाख नेपाली मलेसियामा रहेकाे अनुमानित अांकडा छ । दैनिक सयौं नेपालीहरुले प्रयाेग गर्ने, क्वालालम्पुर विमान स्थलमा दैनिक दर्जनौं नेपालीहरु ठगिने गरेकाे पाईएकाे छ । तसर्थ : अाज क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल मध्यकाे “क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल -१ बारेमा केही जानकारी राख्ने प्रयास गरेका छाैं ।
क्वालालम्पुर बिमानस्थल निर्माण भएकाे धेरै भएकाे छैन । करिब २५ बर्षदेखि याे मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलकाे रुपमा रहदै अाएकाेछ । यद्यपि मलेसियाको याे मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल भने हैन । अरु साना थुप्रै विमान स्थलहरु पनि छन । तर प्रमुख विमान स्थल भने याे एउटा हाे । करिब १० किलोमिटरमा फैलिएकाे याे बिमानस्थलमा हाल दुईवटा विमान स्थल रहेका छन । जसमध्ये “केएलअाईए-१ ” र केएलअाईए-२” रहेका छन । हाल: “केएलअाईए-२ बाट “एरएसियाकाे मात्र फलाईट हुन्छ । अाज हामीले केएलअाईए-१ काे बारेमा लेख्दै छाैं । साहेद एरर्पाेटकाे भुगाेल र सिस्टमकाे बारेमा सामान्य भन्दा सामान्य जानकारी नहुदा नेपालीहरु ठगिने गरेका छन । त्यसैले सामान्य जानकारी दिने हाम्राे प्रयास हाे ।
क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल-१
केएलअाईए -१ मा दुई ठुला हाउसहरु (घर) छन । यसकाे मतलब दुईवटा ट्रमिनलहाउस छन । जहांबाट हामीले यात्राकाे क्रममा जहाज चढ्ने र अाेर्लिने गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये पहिलाे हाे “केएलअाईए-१ ट्रमिनल र दाेस्राे हाे ” “केएलअाईए -१ चार्लि ” । ट्रमिनल भवनबाट नै हामिले अाउने ,जाने गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण यात्रा प्रक्रियाकाे सुरुवात र अन्त्य यहीँबाट गर्नुपर्छ । यसकाे मतलब यात्रुले लिनुपर्ने “बाेर्डिङ पास देखि ईम्रिगेशन चेकजाँच तथा छापकाे काम यहीँ ट्रमिनलबाट हुन्छ भने “चार्लि ” फाेर्गेन फलाईटहरुबाट अाेर्लिने र चढ्ने ठाउँ हाे भन्दा पनि हुन्छ । “ट्रमिनल हाउसबाट जाने फलाईटहरुकाे टिकेटमा गेट “ए र बि ” उल्लेख हुन्छ भने “चार्लि हाउसबाट जाने फलाईटकाे टिकेटमा गेट “सि” उल्लेख गरिएकाे हुन्छ ।
क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल ट्रमिनलहाउस.
याे ट्रमिनल एकदमै बिशाल भवनले बनेकाे छ । यसकाे पांच वटा तला रहेका छन ।
पाँचौ तला : सबैभन्दा माथिकाे तला पांच तला हाे । यसलाई टप फ्लाेर वा फाईभ फ्लाेर भनिन्छ । यहाँ डिपार्टच्युर ( प्रस्थान ) हल रहेकाे छ । यहीँ पांच तलाबाटै यात्राकाे सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चार तला: यहाँ एरलाईन्सहरुकाे अफिसहरु छन ।
तीन तला: यहाँ अराईभल (अागमन हल ) रहेकाे छ । तपाईं नेपालबाट मलेसिया अाउदा यहि हलबाट निस्किनु पर्छ ।
दुई तला : यहाँ फुड ग्राडेन रहेकाे छ। यहाँबाट एर्पाेट नजिकैको हाेटेल समा-सामा, कार पार्पिङ बलकहरु “सि र डि “र बस पार्कमा जाने ठाउँ छ ।
एकतला (भुईतला) : यहाँबा बाहिर निस्किने ठाउँ र ” केएलअाईए एक्सप्रेस ” रेल चढ्न जाने ठाउँ छ ।
मलेसियाको विमानस्थलबाट यात्रा गर्दा कसरी सुरक्षित यात्रा गर्ने त ?
हामी मलेसियाकाे क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल-१ काे प्रयाेग गरि कुनै पनि स्थानमा यात्रा गर्नु पय्राे भने सबैभन्दा पहिला पांचाै तलामा जानुपर्छ । यसलाई बिमानस्थलकाे डिपार्टच्युर हल भनिन्छ । यहां सिधै गाडि जान्छ । तपाईं अाएकाे ट्याक्सि , वस वा कारलाई सिधै पाँचौं तलामा लिन सक्नु हुन्छ । यदि तपाईं भुईतला तलाबाट बस वा रेल चढेर अाउनु भयाे भने पनि सिधै पांचाैं तलामा लिफ्ट वा एक्सिलेटर प्रयाेग गरेर जानुपर्छ ।
पांचाै तलामा पुग्नु भयाे भने त्यहाँ थुप्रै मान्छेकाे भिड हुन्छ । जहाँ काम गर्ने कामदार देखि चाेर फटाहा, यात्रु सबै प्रकारका मान्छेहरु हुन्छन । तपाईं सतर्क रहन जरुरि हुन्छ । सबैभन्दा पहिला तपाईं जान्नु पर्ने कुराे तपाईंको टिकेट सम्बन्धि । टिकेट कुन एरलाईन्स र कति बजेकाे छ ? त्यहीँ अनुसार चेकईन काउण्टर अगाडिकाे स्क्रिनहरुमा तपाईंको फलाईट लिस्ट हेर्नुहाेस । यदि तपाईं नेपाल एरलाईन्सबाट नेपाल जादै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा RA416 ktm 8:30 counter: A देखाएकाे छ भने Ra416 फलाईट नम्बर हाे भने 8:30 मा फलाईट हुने हाे र काउण्टर: A बाट ब्यागेज चेकईन र बाेर्डिङ पास लिनुपर्ने बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै मालिण्डाेकाे -OD181, मलेसियन एरलाईन्सकाे MH114 र अन्यकाे अरु हुन सक्छ ।
नेपाल एरलाईन्सकाे फलाईटबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने चेकईन काउण्टर “ए” काे लाईनमा बस्नुहाेस । अरु फलाईटबाट जादै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाएकाे निर्देशन अनुसारकाे काउण्टरकाे लाईनमा बस्नुहाेस । काउन्टरकाे लाईनमा बसि सकेपछि अाफ्नाे हाते ब्याग र लगेजकाे अबस्था बुझ्नुहाेस । अाफुले लिन पाउने ताैल कति हाे ? समान्यतया एउटा ब्यक्तिले एउटा हाते ब्याग र दुईवटा सम्म लगेज लिन पाउछ । तपाईंले ४० केजी लगेज लिन पाउने अनुमति छ भने पनि एउटै लगेज ४० केजी हुनुहुदैन । एउटा लगेज ३२ केजी भन्दा माथि हुनुहुदैन । लगेजकाे साईज सामान्यतया ३६ ईन्च भन्दा ठुलाे बनाउनु हुन्न ।
नेपाली र बङगालीहरुले प्राय लगेजलाई डाेरिले बन्ने प्रचलन छ । यसाे गर्दा लगेज सुरक्षित त हुन्छ तर कतिपय अबस्थामा स्केन अपरेटर पुलिसले लगेज खाेल्न लगायाे भने खाेल्न अप्ठेराे हुनसक्छ । यहि बहानामा पैसा तिर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । लगेजकाे बाहिर हामिले टांस्ने हाते ट्यागमा पूरा नाम ठेगाना भन्दा पासपोर्ट नम्बर र जाने स्थान KUL to KTM मात्र लेख्दा राम्राे हुन्छ । यसाे गर्दा चाेरहरुले समान पहिचान गर्न सक्दैनन ।
लगेज चेकईन गरेपछि लगेजकाे पेसेन्सजर एर वाईल बेल नम्बर सहितकाे सानाे ट्याग मिल्छ । त्याे ट्याग सुरक्षित राख्नुपर्छ । त्यसैकाे अाधारमा लगेज प्रमाणित हुन्छ । समान धेरै भयाे भने साथिहरुकाेमा समान एड गरेर ताैल मिलाउनुहाेस । काउण्टर “ए र बि” काे नजिक ताैल लिने कांटा छ । ताैल लिएकाे पैसा लाग्दैन । लगेजलाई य्राप गर्नु पय्राे भने त्यहां बसेका बङगाली नेपाली बाट नगर्नुहाेस । त्यहाँ नजिकै कहाँ य्रापरिङ गर्ने मेसिन छ त्यहि गएर य्राप गर्नुहाेस । सकेसम्म घरबाटै गरेर जानुहाेस ।
यदि समान धेरै भयाे भने डष्बिनमा फाल्ने वा त्यहांका स्टापहरुलाई नदिनुहाेस । अाफुलाई छाेड्न अाएकाे साथि वा अाफन्त छ भने राम्रै भाे नत्र भने तीन तलामा स्टाेर रुम छ । त्यहां जानुहाेस र समान लिन अाउन सक्ने अाफन्तकाे पासपोर्ट फाेटाे कपि दिएर वा पासपोर्टकाे फाेटाे देखाएर साथि वा अाफन्तकाे नाममा समान राख्नुहाेस । यसाे गर्दा चार्ज तिर्नुपर्छ तर समान सुरक्षित हुन्छ । २४ घण्टा भित्र साथि वा अाफन्त अाएर समान लिन सक्नुहुनेछ ।
यि सब प्रक्रिया गरेर तपाईं जहाज चढन हिड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले प्राप्त गरेकाे बाेर्डिङ पास कुन गेट नम्बर लेखेकाे छ , फ्लाे (पछ्याउनु) गर्नुहाेस । यदि तपाईंको पास (टिकेट) मा Gate C1, C2.. लेखेकाे छ भने तपाईंको फलाईट चार्लि बाट हुदैछ । त्यसलै तपाईं ईम्रिगेशनबाट भित्र छिरि सकेपछि मेट्राे ट्रेन पकडेर “चार्लि ट्रमिनलहाउसमा ” जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पुगेपछि अाफ्नाे गेट नम्बर अनुसार स्थान पछ्याउनुहाेस ।
त्यस्तै तपाईंकाे टिकेट( बाेर्डिङ पास) मा Gate A/B१,२… लेखेकाे छ भने तपाईंले मेट्राे ट्रेन चढ्नु पर्दैन । त्यहिं ईन्ट्रि भएकाे ट्रमिनलबाट गेट पछ्याउनुपर्छ ।
सहि सुचना कसरी लिने ?
कुनै पनि जानकारी लिनु पय्राे भने विभिन्न माध्मबाट दिएकाे सुचनालाई पछ्याउनु पर्छ । यदि अल्मलिएर सुचना पछ्याउन सकिएन भने “सुचना काउण्टर “(information desk ) मा गएर बुझ्नुहाेस । याता प्रत्यक चेकईन काउण्टरकाे अगाडि तिरकाे काउण्टरमा साेध्नुहाेस । भाषिक समस्या भए त्यहाँ काम गर्ने नेपालीलाई साेध्न सक्नुहुन्छ तर उसले कुनै किसिमकाे प्रलाेभन देखाएमा उसकाे कुरा नसुन्नुहाेस ।
बङगाली र स्थानीय देखि झनै सावधान रहनुहाेस । कतिपय अबस्थामा पुलिस स्वयंले पनि पैसा खान खाेज्न सक्छ त्यसैले सतर्क रहनुपर्छ । बिमानस्थल भित्र ठाउँ-ठाउँमा सुचना डेस्क हुन्छ । त्यहाँबाट सुचना लिनुपर्छ ।
साभार हिमालय टाईम्स
Prevयुएईमा नेपाली महिलाका दु:ख : श्रमदेखि याैन शाेषणसम्म ….. पुरा पढ्नुहोस
Nextपुरुषले सुत्नुअघि भुटेको लसुनको एक पोटी खानुको यस्ता छन्, ७ फाईदा : (पुरा पढ्नुहोस)
नेपालसंगै भारतमा पनि ठुलो प्रसिद्धि कमाए यी हुन् नेपाली पाँच कलाकारहरु !!! को -को हुन् हेर्नुहोस ..
आजको राशिफलः बि.स. २०७५ साल माघ १७ गते बिहिबार इश्वी सन् २०१९ जनवरी ३१ तारीख माघ कृष्णपक्ष एकादशी तिथी ….
केटाहरुले बिचार गर्नुहोस, यसरी झुक्याउन सक्छन् केटीहरुले (भिडियो सहित)
एसईई पास भएकाे खुसीमा बोल्न नसक्ने सुजल बोलेपछि सबैपरे छक्क -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)